(Waxaa laga soo toosiyay Albaaniya)
- Madaxweyne Bujar Nishani
- Ra'iisul wasaare Edi Rama
- Taariikhda 28 Nofeembar, 1912
- Total 28,748 km2 km²
- Biyo (%) 4.7
- 2017 qiyaas 2,876,591
Albania ama Jamhuuriyadda Albania (af-Albani Republika e Shqipërisë) waa wadan ku yaalo barige Koonfureed ee qaarada Yurub.
Waxay xuduudo la wadaagtaa Montenegro dhanka waqooyi-galbeed, Kosovo [a] waqooyi-bari, Waqooyiga Makedoniya dhinaca bari, Giriiga dhinaca koonfureed iyo xadka badda ee ay la wadaagto Giriiga, Montenegro iyo Talyaaniga dhinaca galbeed.
Juqraafi ahaan , qaab dalka kala duwan cimilada , dhulka , biyaha iyo iwm shuruudaha, lagu qeexay in meel ka mid ah 28.748 km 2 (11,100 sq mi). Waxay leedahay kala duwanaansho cajiib ah muuqaalka dhulku wuxuu u dhexeeyaa buuraha baraf-barafka ee Albaniya sidoo kale buuraha Korab , Skanderbeg , Pindus iyo Ceraunian ilaa xeebaha kulul iyo qoraxda ee Albaniin Adriatic iyo Badda Ionian ee ku taal Badda Mediterranean-ka
Wadanku wuxuu xubin ka yahay Qaramada Midoobay , Bangiga adduunka , UNESCO , NATO , WTO , COE , OSCE iyo OIC . Waa musharax rasmi ah xubin ka noqoshada midowga Yurub .  Waa mid ka mid ah aasaasayaashii Ururka Tamarta , oo ay ku jiraan Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha ee Badda Madow
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Albania.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Albania&oldid=202300"
Last edited on 15 Juun 2020, at 01:05
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Juun 2020, marka ee eheed 01:05.